Bush: “Mareykanka waxa uu wajihi karaa weeraro ka halis badan 11-kii September”. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Bush: “Mareykanka waxa uu wajihi karaa weeraro ka halis badan 11-kii September”.
Bush: “Mareykanka waxa uu wajihi karaa weeraro ka halis badan 11-kii September”.
Madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka George Walker Bush oo ka hadlay Munaasabad lagu xusuusanayay weeraradii lagu burburiyay daarihii Ganacsiga dalkaas ee New York & Washington ayaa ka digay weeraro ka halis badan kuwii 11-ka September 2001-dii.
Bush ayaa sheegay in “Argagixisada gudaha ay ka halis badan tahay tan dibadda” sidaas awgeed waxa uu soo jeediyay in feejignaan sare laga galo suuragalnimada halis weliba uu wajihi karo Mareykanka sida uu hadalka u dhigay.
Si toos ah uma aanay sheegin qaabka “Argagixisda gudaha Mareykanka uga jirto” balse waxa uu cambaareeyay weerarkii Aqalka Baarlamaanka ay ku qaadeen Taageerayaasha Madaxweynihii 45-aad ee Donald Trump.
George Bush waxa uu sheegay in aanay waxba ku kala duwaneyn Xagjiriinta Mareykanka ee gudaha dalkaas joogta & Al-Qaacida oo fulisay weerarkii dhulka lagu dhigay Daarihii ganacsiga New York & Washington ee dhacay 11-kii September 2001-dii.
“Labaduba waxa ay ka siman yihiin in ay diiddan yihiin kala duwanaanta iyo karaamada bani aadamka, waxaana ka go’an inay wasakheeyaan astaamaha qaranka. Waa ubadka ka dhashay xumaan oo ay tahay in aan ka hortagno” ayuu yiri Madaxweyne Bush.
Donald Trump ayaa dhankiisa muuqaal uu uga hadlay dhacdo xusuuseedka labaatan sanno jirsatay waxa uu Madaxweynaha ka adkaaday ku dhaliilay in uu ku fashilmay qorshaha bixitaanka Afghanistan maadaama 20-sano kaddib gacanta Taliban maamuleysa Afghan.
Xisbiyada Jamhuuriga & Dimuqraadiga Mareykanka ayaa eedeymo culus isku jeedinaya, dhinac weliba waxa uu soo qaadanayaa qalalaadkii siyaasadeed ee ka dhacay si uu uga dhigo dood sharci ah kuna kicin karo shacabka.
Previous articleDRC oo soo bandhigtay Teneders for The supply
Next articleWadahadalkii Rooble & Farmaajo oo natiijo la’aan lagu kala tagay.